Ndị Farisii Agbaa Nwoke Kpuburu Ìsì Ajụjụ | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
NDỊ FARISII AGBAA NWOKE AHỤ KPUBURU ÌSÌ AJỤJỤ
NDỊ NDÚ OKPUKPE BỤ NDỊ KPURU “ÌSÌ”
Ndị Farisii ekwetaghị na Jizọs mere ka nwoke ahụ kpuru ìsì kemgbe a mụrụ ya hụwa ụzọ. N’ihi ya, ha kpọrọ ndị mụrụ ya ka ha jụọ ha ajụjụ. Ndị mụrụ ya ma na e nwere ike ‘ịchụpụ ha n’ụlọ nzukọ.’ (Jọn 9:22) Ịchụpụ ha n’ụlọ nzukọ ga-eme ka ha ghara iso ndị Juu ibe ha na-efe Chineke, meekwa ka ihe siere ha ike.
Ndị Farisii jụrụ ndị mụrụ nwoke ahụ kpuburu ìsì ajụjụ abụọ. Ha jụrụ ha, sị: “Onye a ọ̀ bụ nwa unu nke unu sịrị na o kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya? Oleezi otú o si na-ahụ ụzọ ugbu a?” Ndị mụrụ ya zara ha, sị: “Anyị maara na onye a bụ nwa anyị, marakwa na o kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya. Ma otú o si hụwa ụzọ ugbu a, anyị amaghị, anyị amaghịkwa onye meghere anya ya.” Ọ bụrụgodị na nwa ha akọọrọla ha ihe merenụ, ha leziri anya ka ha ghara ikwu ihe ga-etinye ha ná nsogbu. Ha gwara ndị Farisii ahụ, sị: “Jụọnụ ya. Ọ ghọọla dimkpa. Ọ ga-azara ọnụ ya.”—Jọn 9:19-21.
Ndị Farisii kpọrọ nwoke ahụ ọzọ yie ya egwu. Ha gwara ya ihe na-abụghị eziokwu banyere Jizọs. Ha sịrị ya: “Nye Chineke otuto; anyị maara na nwoke a bụ onye mmehie.” Nwoke ahụ kpuburu ìsì zara ha, sị: “Ma ọ̀ bụ onye mmehie, amaghị m. Otu ihe m maara bụ na, ọ bụ ezie na m kpuburu ìsì, ana m ahụ ụzọ ugbu a.”—Jọn 9:24, 25.
Ndị Farisii ewereghị ihe ahụ nwoke ahụ kwuru. Ha jụrụ ya, sị: “Gịnị ka o mere gị? Olee otú o si meghee anya gị?” Nwoke ahụ ji obi ike gwa ha, sị: “M kọworo ya unu, ma unu egeghị ntị. Gịnị mere unu ji chọọ ịnụ ya ọzọ? Ùnu chọrọ ịghọ ndị na-eso ụzọ ya?” Ihe a nwoke a kwuru were ndị Farisii iwe, ha agwa ya, sị: “Ị bụ onye na-eso ụzọ nwoke ahụ, ma anyị bụ ndị na-eso ụzọ Mozis. Anyị maara na Chineke gwara Mozis okwu; ma anyị amaghị ebe nwoke a si.”—Jọn 9:26-29.
Ihe a ndị Farisii kwuru juru nwoke ahụ anya, ya agwa ha, sị: “Ọ bụ nnọọ ihe ijuanya na unu amaghị ebe o si ma ya emeghee anya m.” Nwoke ahụ gwara ha ụdị onye Chineke na-ege ntị ma na-anụ ekpere ya. Ọ sịrị ha: “Anyị maara na Chineke adịghị ege ndị mmehie ntị, kama ọ bụrụ na mmadụ na-atụ egwu Chineke ma na-eme uche ya, ọ na-ege ya ntị. Malite n’oge ochie, a nụtụbeghị na mmadụ meghere anya onye kpuru ìsì malite mgbe a mụrụ ya.” Nwoke a kpuburu ìsì gwara ha, sị: “Ọ bụrụ na nwoke a esighị n’ebe Chineke nọ bịa, ọ pụghị ime ihe ọ bụla ma ọlị.”—Jọn 9:30-33.
Ebe ọ bụ na ndị Farisii enweghị ike ịgbagha ihe a nwoke a kwuru, ha katọrọ ya, sị: “A mụrụ gị n’ime mmehie, n’agbanyeghị nke a, ị̀ na-ezi anyị ihe?” Ha chụpụziri ya.—Jọn 9:34.
Mgbe Jizọs nụrụ ihe merenụ, ọ hụrụ nwoke ahụ ma jụọ ya, sị: “Ì nwere okwukwe n’ebe Nwa nke mmadụ nọ?” Nwoke ahụ zara ya, sị: “Ònyekwanụ ka ọ bụ ka m wee nwee okwukwe n’ebe ọ nọ?” Jizọs gwara ya, sị: “Ị hụwo ya, onye a gị na ya na-ekwu okwu bụ ya.”—Jọn 9:35-37.
Nwoke ahụ gwara Jizọs, sị: “Enwere m okwukwe n’ebe ọ nọ.” Ọ kpọọrọ Jizọs isiala iji gosi na o nwere okwukwe na ya ma na-akwanyere ya ùgwù. Jizọs sịrị: “Ọ bụ ikpe a mere m ji bịa n’ụwa a: ka ndị na-adịghị ahụ ụzọ wee hụ ụzọ, ka ndị na-ahụkwa ụzọ wee kpuo ìsì.”—Jọn 9:38, 39.
Ndị Farisii nọ́ ebe ahụ maara na ha na-ahụ ụzọ. Ma, oleekwanụ gbasara ọrụ ha chere na ha na-arụ, ya bụ, ịkụziri ndị mmadụ okwu Chineke? Ha jụrụ Jizọs, sị: “Anyị onwe anyị kwa, ànyị kpuru ìsì?” Jizọs sịrị ha: “Ọ bụrụ na unu kpuru ìsì, unu agaraghị enwe mmehie ọ bụla. Ma, ugbu a, unu na-asị, ‘Anyị na-ahụ ụzọ.’ Mmehie unu na-adịgide.” (Jọn 9:40, 41) A sị na ha abụghị ndị na-akụziri ndị Izrel okwu Chineke, ọ gaara edo anya ihe mere na ha ekweghị na Jizọs bụ Mesaya ahụ. Ma ebe ha ma Iwu Chineke ma ghara ikwere na Jizọs bụ Mesaya, ọ bụ mmehie dị oké njọ ka ha mere.
Mgbe ndị Farisii kpọrọ ndị mụrụ nwoke ahụ kpuburu ìsì, gịnị mere ụjọ ji tụọ ha? Olee ihe ha zara n’ajụjụ a jụrụ ha?
Olee ihe nwoke ahụ gwara ndị Farisii, bụ́ nke ha na-enweghị ike ịgbagha agbagha?
Gịnị mere ndị Farisii ekwesịghị imegide Jizọs?